Inona no lazain’ny Baiboly amiko?
"Fa tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra."Romana 3:22,23
"Mahatoky ka tokony hekena amin’ny fankasitrahana rehetra izao teny izao: tonga tety ambonin’ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota."1 Timoty 1:15
Mbola tsy naely hatraiza hatraiza toy ny amin’izao fotoana izao ny Baiboly, ary mbola tsy nadika tamina fiteny maro toy izao. Eo am-pelatanan’ireo izay maniry hamaky sy hihaino azy izy io ankehitriny, any amin’ny firenena maro. Fa mba manao ahoana kosa moa isika, manoloana io Boky io? Inona no tombony ananany miohatra amin’ny boky hafa?
Tsy mba tahaka ny boky hafa rehetra ny Baiboly, fa mampifandray antsika mivantana amin’Andriamanitra, Izay miresaka amin’ny mpamaky tsirairay. Ny Baiboly dia mampahafantatra ny fijerin’Andriamanitra ny fiainantsika. Ambarany fa ny olona rehetra dia mpanota avokoa, ary mizotra ho amin’ny fitsarana, mankany amina hoavy mandrakizay lavitra Azy.
Inona no tokony hatao, raha izany no teny vakiana ao? Manaiky tsotra fotsiny io fijerin’Andriamanitra io, miaiky fa manaraka izany lalana izany isika, meloka eo anatrehany. Kanefa koa mamaky ny tohiny, mba hahita fa Andriamanitra efa nanomana lalana hamonjena antsika, ary koa mino fotsiny an’i Jesosy Kristy. Tompon’andraikitra ny tsirairay, hanaiky na handà Azy. Jesosy irery no hany mahafaka izay mino Azy tsy hiharan’izany fitsarana izany, Izy irery no manome azy fiainana mandrakizay. Nisolo toerana antsika teo amin’ny hazofijaliana Izy, nizaka ny famaizana ny fahotantsika. Hoy Izy ao amin’ny Filazantsara: “Izao no sitrapon’ny Raiko, dia ny hahazoan’izay rehetra mijery ny Zanaka ka mino Azy fiainana mandrakizay” (Jaona 6:40). Naniry hanatona ahy ny fitiavan’Andriamanitra. Ny herin’izany hafatra izany sy ny akony eo amin’ny fiainako dia maharesy lahatra ahy fa tena Tenin’Andriamanitra tokoa ny Baiboly.